Guddiga Maaliyadda ee Golaha Shacabka oo Guddoon cusub doortay – Kalfadhi
Guddiga Maaliyadda ee Golaha Shacabka ayaa maanta doortay Guddoon cusub, kadib markii uu Guddoomiyaha Golaha Shacabku maanta ka saaray Guddigaas Guddoomiyihii, Kuxigeenkiisa, Xoghayihii Guddiga iyo xubno kale. Waxa uu is bedelkaas kadib Guddigu maantaba u doortay Guddoomiye Maxamuud Siraaji, oo dhawr bilood uun ahaa Xubin ka tirsan Guddiga Maaliyadda.
Siraaji waxa uu noqday Xildhibaan kadib markii la dilay walaalkii oo xilkaas haayey, Wasiirna ahaa. Kuxigeenkiisa Siraaji, waxaa loo doortay Aamino Sheekh Cusmaan, oo teer iyo markii Guddiga la sameeyey ahayd Xubin ka tirsan iyo Aadan Cali Xasan, oo uu Guddigu u doortay Xoghaye. Isaguna waa Xubin maanta lagu soo biiriyey Guddiga.
Guddoomiye Kuxigeenka 2-aad ee Golaha Shacabka, Mahad Cabdalla Cawad, ayaa Guddoonka cusub ee Guddiga kula dardaarmay iney si deg deg ah u qabtaan howlaha culus ee hor yaalla. Sidoo kale, waxa uu sheegay in Guddoonka Golaha Shacabku uu diyaar u yahay iney Guddiga kala shaqeeyaan ku qabashada waqtiga ka haray sanadkan hawlaha culus ee horyaala.
Goobta doorashada, oo ahayd Filla Hargeysa, waxaa joogay Guddoomiye Kuxigeenka 2-aad ee Golaha Shacabka, Mahad Cabdalla Cawad, Hab-dhowraha Golaha Shacabka, Maxamed Cabdulllaahi Xasan (Nuux) iyo Xoghayaha Guud ee Golaha Shacabka, Cabdikariin Xaaji Cabdi (Buux).
Xildhibaan Mina Shibis: Waa in qoondada dumarka ee siyaasadda lagu qoraa dastuurka